Home » Lahatsoratra ho an'ny vahiny » Toerana fitsangatsanganana Jeep
Manana Jeep ianao, noho ny fitomanianao mafy, iray amin'ireo kodiarana efatra manana storied indrindra eto an-tany. Amin'ny fotoana iray, mila mampihatra traikefa an-tsehatra ianao, tsara kokoa mandritra ny fialantsasatra, rehefa afaka mandray hatsaran-tarehy mahafinaritra ianao ary manao toby kely.
Ireto misy toerana fialantsasatra Jeep ambony manampy anao handeha.
Ny Oregon Dunes National Recreation Area dia miparitaka amin'ny 40 kilaometatra miala ny moron'ny Pasifika Pasifika. Ianao dia afaka ampiasao ny Jeep-nao eo amin'ny antsasaky ny velarantanin'i Oregon Dunes izay 31,500 hektara. Any amin'ny faritra avaratra sy afovoany, azonao atao ny mametraka ny Jeep-nao eo amin'ireo dongon'ny dongon-dranomasina feno vazivazy, ny sasany amin'ireny dia mitafy an-jatony ambonin'ny haavon'ny ranomasina.
Na dia voafetra bebe kokoa aza ny faritra atsimo dia mety hipoka izy io, miaraka amin'ireo làlambe mandalo ireo zavamaniry akaikin'ny morontsiraka sy manamorona ny morontsiraka. Mitandrema amin'ireo mpankafy namana rehefa mahatsapa tsy mandeha amin'ny lalana anaty fasika ianao. Afaka mitoby any amin'ilay faritra ianao na mandry eo akaiky eo.
Ny Jeep Jamborees voalohany dia natao tao amin'ny Rubicon Trail, 60 taona mahery lasa izay, hampiroborobo ny fizahan-tany amin'ny faritra. Androany, mpankafy Jeep marobe sy karazana 4 × 4 hafa no mamakivaky ilay làlana malaza 22-kilaometatra isan-taona. Raha ny marina, ho an'ireo mpankafy Jeep, ny fanaovana izany dia karazana fombafombam-pizarana.
Ny lalana mamakivaky ny tendrombohitra sierra Nevada any California dia fipoahana nefa sarotra tokoa, ary tsy misy toa ny firaiketam-po amin'ny fiarahana amin'ny hafa izay mirona amin'ny Jeep-ny. Afaka mandeha samirery ianao, fa tsara kokoa ny mihazakazaka amina hazakazaka voalamina mba handraisana soa avy amin'ny zavatra niainana. JEREO NY Fifanarahana fampanofana Jeep.
Raha te hiala amin'ny zava-drehetra ianao, tondroy ny Jeep mankany amin'ny faritra mangingina any New Jersey's Wharton State Forest. Ao anatin'ireo velarantaniny 122,000 miampy dia 225 kilaometatra ny lalana tsy voatsinjara tsy azo zahana. Ho mora eto ny Jeep-nao, satria mety ho fasika sy malefaka ny lalana, indrindra ny oram-be.
Mandritra ny ala dia zahao ny Batsto Village manan-tantara, izay hatramin'ny afovoan'ny taona 1800 dia ivon'ny fanaovana vy sy vera.
Araraoty ny iray amin'ireo faritra amoron-tsiraka atsinanana izay mamela ny hitondra amoron-tsiraka. Alohan'ny hamelezana ny Outer Banks any Avaratr'i North Carolina dia tsarovy fotsiny ny hampihenana kely ny tsindry kodiaranao hanampiana ny Jeep eny amoron-dranomasina fisaka - ny fasika dia manamora kokoa ny mihady ka tafahitsoka. Mila fahazoan-dàlana hitondra fiara amin'ny ankamaroan'ny faritra amoron-dranomasina koa ianao.
Aza miala raha tsy mahita ny soavaly dia mihantona amin'ny tendrony avaratry ny Banky, ary koa ny Fahatsiarovana Nasionaly Wright Brothers.
Nosy Drummond, Michigan
Ny fanjakana Mitten Nosy Drummond manolotra fifangaroana terrain sy làlan-kaleha mampihetsi-po ho an'ireo vao manomboka sy mpandeha kodiarana efatra. Raha ny marina, ny nosy dia manana tamba-jotra mivelatra miaraka amin'ny lalana 40 kilaometatra ho an'ny Jeep sy 4x4 hafa izay miainga amin'ny làlana feno fotaka mankany amin'ny kijana malalaka.
Raha manandrana ny sasany amin'ireo làlana sarotra kokoa ianao, dia manampy amin'ny fisidinana takelaka sy fahasamihafana mihidy ary kodiarana lehibe. Hiatrika dingana vato lava lava ianao izay mila mivezivezy.
Mirefy 800,000 100 hektara mahery ny velarany, io no iray amin'ireo valan-javaboary lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Big Bend National Park dia manana lalana maloto maherin'ny XNUMX kilaometatra izay mitaky ny fanesorana ny tany natolotr'i Jeeps.
Mila tontolo iray andro ianao handinihana ny lalana 51 kilaometatra, izay mihodina manodidina ny sasany amin'ny Rio Grande. Ny Jeep-nao koa dia ho mora raisina rehefa mikapoka ny Black Gap Road 18 kilaometatra, izay fantatra amin'ny fihorakorahana, ny fiampitana rano, ary ny dingana Black Gap Step izay mahafinaritra nefa manahirana.
Ny toerana fialan-tsasatra Jeep dia manolotra fomba mahatalanjona hijerena ireo toerana izay tsy ho hitanao matetika amin'ny fiara mahazatra rehefa mamakivaky faritra maro kokoa noho izay azo atao an-tongotra. Midira ao amin'ity Jeep ity amin'ity taona ity ary mankafy traikefa nahafinaritra iray.